Fisandohana andraikitra sy fakàna an-keriny : Voasambotra indray i Danny
MH 16:29:00 actualite
Efa ela no nitadiavana an’Andrianarivo Ainatiana Raymond Danny noho ny resaka fisandohana ho mpitandro ny filaminana sy fakàna an-keriny ka tratra teny an-tranony teny Antanandrano izy ny alarobia teo. Efa nisandoka ho kolonely sy polisy manamboninahitra i Dany ary farany teo dia kaomandan’ny tafika indray no nisalorany. Nahatratrarana basy, izay tsy misaraka aminy sy fitaovana hafa izay fitondrany rehefa manao ny asa ratsy izy tamin’ny fotoana nahitana azy.
Araka ny fantatra dia efa voasambotra noho ny fisolokiana, fitondrana fitaovam-piadiana tsy nahazoana alalana sy fisandohana andraikitra i Danny tamin’ny volana May 2017 ary nahiditra teny Antanimora. Tamin’izany dia nilaza izy fa mahatafavoka entana ao amin'ny seranan-tsambon’i Toamasina ary misoloky olona maro ihany koa amin'ny resaka tany izay efa mahatratra teti-bidy hatramin’ny 130 tapitrisa ariary. Manao fanamiana miaramila foana izy ity amin’ny andavanandro ary misoloky ho komandà ao amin’ny tafika, ary efa nigadra tamin'ny resaka fisandohana andraikitra sy fisolokiana ihany koa teo aloha.
Iray volana fotsiny anefa no nijanonany teny dia tafavoaka indray izy. Raha ny loharanom-baovao iray dia toa hoe mamafy volabe mihitsy izy mba hahafahany mivoaka ny fonja. Nanohy ny asa ratsiny nefa izy vao tafavoaka ny fonja ka misandoka hoe Komandà Danny. Tamin’ny 15 novambra lasa teo no namoaka ny filazana fampitadiavana azy ny mpitandro ny filaminana ka dia izao tratra izao indray izy.
Milaza ho mpivavaka ?
Nisy fotoana talohan’ny nikarohana azy tamin’ny herintaona dia fantara fa nivavaka niaraka tamina vondron’olona iray izy sy ny namany akaiky izay nitarika azy tao. Nahazo solon’anarana ho komanda niova fo izy tamin’izany ary efa nitory teny mihitsy ka nampitolagaga ny olona nanatrika tao hoe tena olona hafa tokoa. Kanjo nivoaka ny filazana fikarohana vao taitra daholo ny mpiara-mivavaka aminy.